Izindaba - Izinto zemvelo ezihlanzekile
1. Indwangu yelineni
Amalineni, ngokungadingekile ukusho, asetshenziselwa izingubo zasehlobo. Ivumela isikhumba ukuba siphefumule, kepha futhi okuphefumula kakhulu akukuniki izithukuthuku eziminyene, akunankinga kagesi ongaguquguquki, futhi okuthambile ukuthinta, abantu abalwa negciwane banobungane ikakhulukazi. Ngaphezu kwalokho, indwangu uqobo iyabiza kakhulu futhi inekhwalithi ephezulu, okwenza kube lula ukugqokwa ehlobo.
Enye yezinkinga ngelineni ukuthi ijwayele ukushwabana. Uma ugqoka ingubo ehlelekile eyenziwe ngelineni elimsulwa, noma ngabe i-ayinawe ekuseni, izoshwabana uma uya emhlanganweni wenkampani emini.
Ungabheka ukotini kanye nendwangu ehlanganisiwe, unake okuqukethwe kwe-hemp kungaphansi kukotini, njenge-60 cotton + 30 hemp. Le nto inezicelo ezinkulu, ngakho-ke ayibukeki ibudlabha njengezincengezi ezincane, kepha ingeza ukuthungwa. Ungayifaka ekhabethe lakho ngemuva kokuyihlanza, ngokungafani nelineni elimsulwa, elidinga uku-ayina.
Izindwangu 2.Real kasilika
Izingubo zikasilika omsulwa inganekwane ekhethekile yinhle ngokukhethekile, kepha ukukhuthazela kukasilika omsulwa akukhuli, ngoba uphuzi, udwebe inkinga kasilika ukukhiqiza, ufuna ukuthenga ukubuya uzogqoka igama elidala ngezikhathi ezijwayelekile ukuze uthathe okukhethekile ukunakekelwa ekugcineni ihlanzekile. Akulula kakhulu ukuyigcina, kepha ngoba iyashelela futhi ipholile ehlobo, abesifazane abaningi bayayithenga.
Ukwazi izakhiwo zayo, futhi udinga ukunaka inkinga, kusilika nelineni njengokulula ukushwabana! Futhi isigaba sikasilika omsulwa naso sikhetheke kakhulu, sibe nosilika, usilika waseJapane, usilika waseFrance zonke izinhlobo, phakathi kwazo zinosilika ababili kulula ukukwenza.
Njenge-crepe esindayo i-DE Chine, ivame kakhulu kusilika, ubuso bubukeka njengokusobala okusobala, okusetshenziselwa ukwenziwa kwezingubo, futhi akulula ukugoqwa, kulula ukuthenga emakethe.
Kukhona nohlobo lwe-satin elula, ngoba engeza cishe okungaphansi kwe-10 spandex, ngakho-ke yiba usilika onwebekayo, ovame ukusetshenziselwa ukwenza amahembe, anti-wrinkle engenakunqotshwa nakho kuhle kakhulu ukukugcina, akudingeki ukhathazeke ngokuqina.
Indwangu kakotini inomphumela wokumunca izithukuthuku, kepha futhi ingavimbela ngempumelelo iphunga lezithukuthuku, gqoka umzimba ngeke ujuluke esikhunjeni uzokhula ama-red rashes. Geza umshini wokuwasha uphonsa, geza ikhabethe elihle elomile, unganaki ukuthi kanjani.